Bit By Bit - Running fanandramana - 4.5.1 Ampiasao ny tontolo misy anao
Ny logisty, ny fomba tsotra indrindra hanaovana fanandramana nomerika dia ny fametrahana ny fanandramanao eo amin'ny tontolo iray efa misy. Ny fanandramana toy izany dia azo atao amin'ny sehatra marim-pototra ary tsy ilaina ny fiaraha-miasa amin'ny orinasa na fampivoarana rindrambaiko lehibe.
Ohatra, Jennifer Doleac sy Luke Stein (2013) dia nanararaotra ny tsena an-tserasera tahaka ny Craigslist mba hanatanterahana ny fanandramana izay nandraisan'ny fanavakavaham-bolon-koditra. Nanonona iPod an'arivony izy ireo, ary nanova tanteraka ny toetran'ny mpivarotra, dia afaka nianatra ny vokatry ny hazakazaka amin'ny fifandraisana ara-toekarena izy ireo. Ankoatr'izay, nampiasa ny haben'ny fanandraman'izy ireo izy ireo mba haminavina rehefa lehibe kokoa ny vokatra (fahasamihafana eo amin'ny fitsaboana) ary manome hevitra sasantsasany momba ny antony mety hitrangan'ny vokatra (mekanisma).
Ny adiresy iPod Doleac sy Stein dia niova ho telo lehibe. Voalohany, nanova ny toetran'ny mpivarotra ireo mpikaroka, izay nampisongadina ny tànan'ny sary mihazona ny iPod [fotsy, fotsy, mainty ary tatoazy] (sary 4.13). Faharoa, nanova ny vidin'ny fangatahana [$ 90, $ 110, $ 130]. Fahatelo, izy ireo dia nanova ny hatsaran'ny antonta-kevitry ny dokam-barotra [avo lenta sy ambany-kalitaona (ohatra, ny fahadisoana diso sy ny fahadisoana diso)]. Noho izany, ny mpanoratra dia nanana 3 \_(\_times\_) 3 \_(\_times\_) 2 \_(\_times\_) izay nampiasaina nanerana ny tsena maromaro mihoatra ny 300, avy amin'ny tanàna (oh: Kokomo, Indiana ary North Platte, Nebraska) tanàna (eg, New York sy Los Angeles).
Sary 4.13: Ireo tanana ampiasaina amin'ny fanandramana an'i Doleac and Stein (2013) . Ny iPods dia novidin'ireo mpivarotra manana toetra isan-karazany mba handraisana fanavakavahana eo amin'ny tsena an-tserasera. Navoaka tamin'ny alalana avy amin'ny Doleac and Stein (2013) , sary 1.
Nolavina nanerana ny fepetra rehetra, ny vokatra dia tsara kokoa ho an'ny mpivarotra fotsy noho ireo mpivarotra mainty hoditra, miaraka amin'ireo mpividy tatoazy izay manana vokatra miandalana. Ohatra, nahazo vatsy fanampiny ireo mpivarotra fotsy ary nahazo vidin-tsolika farany farany. Ankoatr'ireny vokatra mahazatra ireny, dia nanombantombana i Doleac sy Stein fa misy ny vokany. Ohatra, ny faminavina iray avy amin'ny teôlôjia taloha dia ny hoe ny fanavakavahana dia ho kely kokoa amin'ny tsena izay ahitana fifaninanana bebe kokoa eo amin'ny mpividy. Amin'ny fampiasana ny isan'ny tolotra ao amin'io tsena io ho toy ny lanjan'ny habetsaky ny fifaninanana mpividy, ireo mpikaroka dia nahatsikaritra fa nahazo soso-kevitra ratsy kokoa ireo mpivarotra mainty tamin'ny tsena tamin'ny fifaninanana ambany. Ankoatra izany, amin'ny fampitahàna ny vokatra ho an'ny dokambarotra amin'ny lahatsary avo lenta sy mendrika, Doleac sy Stein dia nahita fa ny hatsaran'ilay adihevitra dia tsy niantraika amin'ny tsy fahombiazan'ny mpivarotra mainty hoditra sy tatoazy. Farany, nanararaotra ny fisian'ireo dokam-barotra napetraka tao amin'ny tsena 300 mahery, nahita ireo mpivarotra mainty hoditra kokoa noho ny vidin'ny heloka bevava sy ny fananganana trano avo. Tsy misy amin'ireo valiny ireo no manome antsika fahatakarana mazava tsara ny antony mahatonga ny mpivarotra mainty hoditra vokariny kokoa, fa raha ampifandraisina amin'ny valin'ny fandalinana hafa dia afaka manomboka mampahafantatra ny teoria momba ny antony fanavakavahana ara-piraisialy amin'ny karazana fifanakalozam-bola ara-toekarena.
Ohatra iray hafa izay mampiseho ny fahafahan'ny mpikaroka hanao fitiliana amin'ny sehatra nomerika amin'ny rafitra efa misy dia ny fikarohana nataon'i Arnout van de Rijt sy ny mpiara-miasa (2014) amin'ny fanalahidy hahomby. Ao amin'ny lafiny maro eo amin'ny fiainana, toa ny olona toa mitovy amin'izany dia miatrika vokatra tena samihafa. Ny fanazavana iray mety ho an'ity lamina ity dia ny tombotsoa kely sy ny ankapobeny dia mety hitazona sy hivoatra mandritra ny fotoana, fomba iray iantsoan'ny mpikaroka faingana ny tombony . Mba hamaritana raha ny fahombiazan'ny fahombiazan'ny fahombiazan'ny fahombiazan'ny van de Rijt sy ny mpiara-miasa (2014) niditra an-tsehatra tao amin'ny rafitra efatra samihafa izay nahomby tamin'ny mpandray anjara voafantina, ary avy eo dia nandrakitra ny vokatr'io vokatra io.
Raha ny tena manokana, Van de Rijt sy ireo mpiara-miasa (1) nanome vola ny tetikasam-pifidianana efa nisafidy tao amin'ny tranonkala Kickstarter, vohikala fanangonam-bola; (2) nomarihina tamim-pahamalinana tsotsotra voamarina amin'ny Epinions, tranonkala famerenana mamokatra; (3) nanome loka ho an'ireo mpandray anjara voafidy amin'ny sehatra Wikipedia; ary (4) nanasonia fanangonan-tsonia imasom-bahoaka tao amin'ny change.org. Nahita valiny tena mitovy izy ireo nanerana ny rafitra efatra: ny mpandray anjara izay nomena fahombiazan'ny fahombiazan'ny fahombiazan'ny fahombiazany dia nanamafy ny fahombiazany raha oharina tamin'ny olon-tsy izy ireo ihany (4.14). Ny fisian'ny lamina mitovy amin'ny rafitra maro dia manatsara ny valim-panafahan'ny vokatra avy amin'ireo vokatra ireo satria mampihena ny lanjany izany lozam-pamokarana izany amin'ny rafitra manokana.
4.14: Hisy fiantraikany maharitra amin'ny fahombiazana nomena amin'ny rafitra sosialy efatra samihafa. Arnout van de Rijt sy mpiara-miasa (2014) (1) nanome vola ny tetikasam-pifaninanana nofantenina tao amin'ny tranonkala Kickstarter, tranonkala mpikirakira aterineto; (2) nomarihina tamim-pahamalinana tsotsotra voamarina amin'ny Epinions, tranonkala famerenana mamokatra; (3) nanome loka ho an'ireo mpandray anjara voafidy amin'ny sehatra Wikipedia; ary (4) nanasonia fanangonan-tsonia imasom-bahoaka tao amin'ny change.org. Nampifanarahina tamin'ny Rijt et al. (2014) , sary 2.
Miaraka amin'ireo ohatra roa ireo, dia mampiseho fa afaka manao fanandramana miainga amin'ny sehatra dizitaly ny mpikaroka raha tsy mila ny hiara-miasa amin'ny orinasa na hananganana rafitra nomerika. Ankoatr'izay, ny tabilaly 4.2 dia manome ohatra marobe izay mampiseho ny karazana izay azo atao rehefa mampiasa ny fotodrafitrasa misy ny rafitra efa misy ny mpikaroka mba handefasana fitsaboana sy / na ny vokatra azo. Ireo fanandramana ireo dia mora vidy ho an'ny mpikaroka ary manolotra hetsika tena izy izy ireo. Saingy ny mpikaroka dia manome fifehezana voafetra amin'ny mpandray anjara, ny fitsaboana ary ny vokatra azo alaina. Ankoatra izany, ho an'ny fanandramana mitranga ao anatin'ny rafitra tokana, ny mpikaroka dia mila miahiahy fa ny vokatr'izy ireo dia mety ho tarihan'ny dinamikam-pahefana manokana (ohatra ny fomba amam-panao amin'ny laharam-baovaon'ny Kickstarter na ny fomba fiovana izany.org amin'ny fangatahana fangatahana, jereo ny adihevitra momba ny algorithmika mifangaro ao amin'ny toko 2). Farany, rehefa mandalo amin'ny rafitra miasa ny mpikaroka, fanontaniana manitikitika ny saina dia mety hanimba ny mpandray anjara, ny tsy mpandray anjara, ary ny rafitra. Hodinihintsika ao amin'ny toko faha-6 ireo fanontaniana etsy ambany ireo, ary misy fifanakalozan-kevitra tsara ao amin'ny appendix de van de Rijt et al. (2014) . Ny fifanakalozan-kevitra izay miasa amin'ny rafitra efa misy dia tsy tsara ho an'ny tetikasa tsirairay, ary noho izany, ny mpikaroka sasany dia manangana rafitra fanandramana manokana, araka izay asehoko amin'ny manaraka.
Tabilao 4.2: Examples of experiments in existing systems
Ny vokatry ny barnstars amin'ny fandraisana anjara amin'ny Wikipedia Restivo and Rijt (2012) ; Restivo and Rijt (2014) ; Rijt et al. (2014)
Ny vokatry ny hafatra manohitra ny fanorisorenana momba ny siokantsera raciste Munger (2016)
Ny vokatry ny varotra varotra amin'ny vidin'ny varotra Lucking-Reiley (1999)
Ny fiantraikan'ny laza amin'ny vidin'ny varotra an-tserasera Resnick et al. (2006)
Ny vokatry ny varotra mpivarotra amin'ny varotra karatra baseball amin'ny Ebay Ayres, Banaji, and Jolls (2015)
Ny vokatry ny varotra mpivarotra amin'ny vidin'ny iPods Doleac and Stein (2013)
Ny vokatry ny hazakazaka amin'ny vahiny amin'ny Airbnb Edelman, Luca, and Svirsky (2016)
Vokatry ny fanomezana ho an'ny fahombiazan'ny tetikasa ao amin'ny Kickstarter Rijt et al. (2014)
Ny vokatry ny firazanana sy ny foko amin'ny trano fonenana Hogan and Berry (2011)
Ny vokatry ny fanombanana tsara amin'ny fanombanana amin'ny ho avy amin'ny Epinions Rijt et al. (2014)
Ny vokatry ny sonia momba ny fahombiazan'ny fangatahana Vaillant et al. (2015) ; Rijt et al. (2014) ; Rijt et al. (2016)